नेपालले टि-२० बिश्वकप खेल्ने पक्का ! आईसिसीले टि-२० बिश्वकपमा २० टिमलाई खेलाउने !
काठमाडौं : अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) ले सन् २०२४ देखि २०३१ सम्म हुने आइसिसी इभेन्ट्समा सहभागी संख्या परिमार्जन गरेको छ।
मंगलबार बसेको आइसिसीको बोर्ड बैठकले एकदिवसीय विश्वकप र टी-२० विश्वकपमा सहभागी संख्या बढाउने र च्याम्पिन्स ट्रफी फेरि सुचारू गर्ने निर्णय गरको हो।
आइसिसीका अनुसार सन् २०२७ र २०३१ को एकदिवसीय विश्वकपमा १४ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। त्यसअघि २०२३ मा भारतमा हुने तय एकदिवसीय विश्वकपमा भने १० टिमबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
यस्तै टी-२० विश्वकपमा सहभागी टिम संख्या २० पुर्‍याउने निर्णय भएको छ। सन् २०२४, २०२६, २०२८ र २०३० को टी-२० विश्वकपमा २० टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
त्यसअघि २०२१ र २०२२ को टी-२० विश्वकपमा भने १६ टिमबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। ८ टिमबीच हुने च्याम्पियन्स ट्रफी २०२५ र २०२९ मा हुनेछ। यस्तै विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनल २०२५, २०२७, २०२९ र २०३१ मा गर्ने आइसिसीको निर्णय छ।
एकदिवसीय विश्वकपमा ७-७ टिम गरी दुई समूहमा खेलाइनेछ। शीर्ष ३-३ टिम गरी ६ टिमबीच सुपर सिक्स हुनेछ। त्यसपछि सेमिफाइन र फाइनल हुनेछ । टी-२० विश्वकपमा ५-५ टिम सम्मिलित ४ समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। प्रत्येक समूहमा शीर्ष २-२ टिटिम गरी ८ टिम सुपर-८ मा पुग्नेछन्।
त्यसपछि सेमिफाइनल र फाइनल हुनेछ। च्याम्पियन्स ट्रफी ४-४ टिम सम्मिलित २ समूहमा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। शीर्ष २-२ टिम सेमिफाइन पुग्नेछन्। नेपाल अहिले आईसिसीको टि-२० बरियतामा १३ अौ स्थानमा छ । त्यसै टि-२० बिश्वकपमा २० टिमले खेल्ने भएसँगै नेपालले पनि बिश्वकप खेल्न पाउँने पक्का छ । सेतोपाटीबाट
२०७८ जेष्ठ १९, बुधबार १८:०१ गते 1 Minute 225 Views
अफ्रिदीको घोषणा : नेपाली टिमलाई पाकिस्तान बोलाएर क्रिकेट खेलाउन पहल गर्छु ।
अफ्रिदि भन्छन् – इपिएलमा दुई खेल खेल्छु तर शक्दो छक्का हानेर मनोरञ्जन दिनेछु ।